भिडियो समाचार : नेपालमा कोरोनाभाइरसको चेकजाँच नभएको चिकित्सककै आरोप | Ratopati
भिडियो समाचार : नेपालमा कोरोनाभाइरसको चेकजाँच नभएको चिकित्सककै आरोप
प्रदेश २ नामबारे अन्योल
प्रदेश–२ को नामकरणका लागि मंगलबार प्रस्ताव गरिएको सवै नाम अस्वीकृत भएको छ ।
प्रदेश २ को नामकरणका लागि मंगलबार भएको जानकी प्रदेशको पक्षमा ३७ मत खसेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेशका लागि भएको मतदानमा ३७ मत परेको प्रदेश–२ सभा
सचिवालयले जनाएको छ । योसँगै प्रदेश २ मा नेकपाले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेश अस्वीकृत भएको छ ।
१०७ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा जानकी प्रदेशमा ३७ मत र विपक्षमा ७० मत खसेको हो ।
त्यसैगरी, नेपाली काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला–भोजपुराको पक्षमा भएको मतदानमा २८ मत परेको प्रदेश–२ सभा सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै विपक्षमा ७९ मत खसेको छ ।
योसँगै प्रदेश २ मा काँगेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला–भोजपुराको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।
आजै मध्य मधेश प्रदेशको पक्षमा पनि चुनाव भएको थियो । मध्य मधेश प्रदेशको नाम पनि अस्वीकृत भएको छ ।
प्रदेश २ मा नेकपाका ३२ सांसद छन् । नेकपाका ३२ बाहेक ५ मत नेकपाको पक्षमा परेका छन् । तर ती मत कुन पार्टीका सांसदले दिए भन्ने खुलेको छैन । प्रदेशको नामाकरण गर्नका लागि दुई तिहाई मत चाहिन्छ अर्थात ७२ मत भएपछि मात्र प्रदेश २ को नाम पारित हुन्छ ।
उद्योग समिति लेखराज भट्ट
उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को सन्त्रासका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी भइरहेको बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जनाएको हो ।
मंगलबार उद्योग समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको बताए ।
मन्त्री भट्टले चाँडै सुपथ मूल्य पसल र घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा पनि छलफल भएको बताए ।
मन्त्री भट्टले बजार अनुगमनका लागि गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही गर्ने र अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताए ।
उनले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिण्डर भरेर नराख्न पनि आग्रह गरेका छन् । असुरक्षित हुने भएकाले भरेका सिलिण्डर घरमा भण्डारण नगर्न नेपाल आयल निगमले पनि चाँडै सूचना प्रकाशन गरी आग्रह गर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ ।
एसइइ मन्त्री खतिवडा
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) नियमित तालिकामै सञ्चालन हुने बताएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको जोखिम भएपनि उच्च सतर्कताका साथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नियमित तालिका अनुसार नै एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुने बताए ।
चैत्र ६ गतेदेखि नै नियमित तालिका अनुसार यथावत रुपमा परीक्षा सञ्चालन हुने उनले बताए । यस वर्ष ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ जना विद्यार्थीहरु एसइइ परीक्षामा सहभागि हुँदै छन् ।
कोरोनाभाइरस : निराशाका मात्र कति कुरा गर्ने, अब आशाका कुरा पनि गरौँ
मदिराबाट बन्ने सेनिटाइजर प्रभावकारी, तर होसियारी नअपनाए दुर्घटनाको खतरा
‘कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक कलाकार !’ (अडियोसहित)
कोरोनाभाइरसको चिनियाँ समाधान– परम्परागत औषधिमार्फत रोकथामको प्रयास !
प्रेस रिभ्यू : कोरोनाको त्रास – कतारबाट नेपाली डिपोर्ट, नेपालबाट ३५ विदेशी फिर्ता
अर्थ समिति बीमा विधेयक
बीमा कम्पनीको एक प्रतिशत भन्दा बढी संस्थापक शेयर हुने व्यक्ति कुनैपनि बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले एक प्रतिशत भन्दा बढी शेयर भएका व्यक्तिले बीमकसँग वित्तीय स्वार्थ राखेको हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संस्थापक शेयर एक प्रतिशत भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई सिइओ बन्न आयोग्य मान्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनैपनि सिइओले दोस्रो बजारबाट खरिद गरेको साधारण शेयर समेत खुलाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै बैठकमा बीमा कम्पनीहरुलाई लघुबीमा कार्यक्रम अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विधेयकमै व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
अर्थ समितिमा बीमा विधेयक
त्यसैगरी, सरकारले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय ‘बीमा समिति’लाई खारेज गरी बीमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ ।
बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकिकरण गर्न बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले ‘बीमा समिति’ खारेज गरी ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने भएको हो ।
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकिकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले ‘बीमा ऐन २०४९’ कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बीमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरु आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानून र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्य्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको एकीकृत ढंगले समाधान गर्ने गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा भूमिसंग जोडिएर सदनमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उनले सबै समस्याको एकीकृत समाधान गर्ने गरि आवश्यक ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भईरहेको बताएकी हुन् । उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या उठाईरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
विगतबाट शिक्षा लिदै सरकारले भूमिसंग जोडिएका सबै कानून निर्माण गरेर मात्रै व्यवहारिक कार्य अघि बढाउने तयारीमा लागेको स्पष्ट पारिन् ।
सांसद कोमल ओलीले अनधिकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारवाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कहिले देखि प्रभावकारी बन्छ भनी प्रश्न गरिन् ।
मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्र्तगत सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको र जाँचबुझ आयोग क्रियाशिल रहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारको काम कारवाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्रप्रकास पुरीले सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारको काम कारवाहीमा धृणा, अवहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर र संकेतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे÷गराएमा र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पु¥याउने कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुनु उपयुक्त नुहुने बताए ।
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण एकजनामा पनि नदेखिएको बताइरहेका बेला वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुन्दरमणि दीक्षितले भने संकास्पद व्यक्तिमाथि कुनैपनि परीक्षण नभएको आरोप लगाएका छन् ।
कोरोना भाइरसका विषयमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षत्कारमा बोल्दै डा. दीक्षितले भाइरस परीक्षण नै नगरी सरकारले संक्रमण देखिएको छैन भन्दै जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाए ।
उनले सरकारसँग कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने किट नै नभएको दावी समेत गरे । उनले सरकारसँग भएका केही किटहरु भिआइपीको परीक्षणका लागि मात्र प्रयोग गरिएको आरोप समेत लगाए ।
एकदिन अघि मात्रै इटलीबाट प्रशिक्षणका लागि आएका एकजना व्यक्तिलाई ज्वरो र खोकी लागेको भएपनि सरकारले परीक्षण नगरिदिएको उनको दावी छ ।
उनले आफ्नो अस्पतालमा अझैपनि ३ जना संकास्पद बिरामी रहेको तर टेकु अस्पतालले परीक्षण नगरिदिएको आरोप समेत लगाए ।
साक्षात्कारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भने कोरोना भाइरसको सन्त्रास देखाएर कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाही गरिरहेको बताए ।
कोरोना विरुद्ध लड्न चीनको साथ
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट प्रभावित छिमेकी देश चीनले नेपाललाई कोरोना विरुद्ध लड्न आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ । चिनियाँ दूतावासमार्फत चीनले नेपाल सरकारलाई के–के सहयोग र सहायता आवश्यक पर्छ भनेर लिस्ट समेत मागेको छ ।
यस अघि नेपालले चीनलाई कोरोना विरुद्ध लड्न १ लाख थाम मास्क पठाएर ऐक्यवद्धता जनाएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कोरोना संक्रमणको सम्भावित दबावमा रहेको र यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा प्रभाव पारेको भन्दै चीन यसबेला नेपाललाई सबैखाले सहायता दिन तयार रहेको जानकारी गराइएको छ ।
चीनले केही राष्ट्रलाई सहायता बढाउने नीति अनुरुप नेपालको आवश्यकता के हो भनेर सोधेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
चीनले नेपाललाई पठाएको पत्रमा– के नेपाल यो बेला चीनको सहयोग र सहायता चाहान्छ ? नेपाललाई हामीले मास्क र अन्य मेडिकल सप्लाइजहरु सहितको मेडिकल टिम पठाउनुपर्छ ? हामी जुनसुकै बेला पनि तप्तर छौं । भनेर सोधेको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण हालसम्म विश्वका १६२ देशमा फैलिइसकेको छ । १ लाख ७८६ भन्दब बढीमा भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । हालसम्म विश्वभर ७ हजार ४ सय बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
संक्रमणबाट चीन पछि इटालीमा धेरैको मृत्यु भएको छ । हालसम्म चीनमा ३ हजार २ सय २६ जनाको मृत्यु भएको छ भने इटालीमा २ हजार १ सय ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसैगरी इरानमा ९ सय ८८ र स्पेनमा ४ सय ९७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
यसैगरी फन्समा १ सय ४८ र अमेरिकामा ९३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । भाइरस संक्रमणका कारण साउथ कोरिया, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड जपान यूके लगायतका देशमा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । पछिल्ला दिन यूरोपमा भाइरसको संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिरहेको छ । नेपालमा पनि भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
छिमेकीले सीमाका पिलर उखेलेर फालिदिने र गाडिदिने प्रवृत्ति बढ्यो: गृहमन्त्री थापा